LP ဆိုတာ ဘာလဲ ? (၂) ~ မောင်သက်ဝေ
LP ဆိုတာ ဘာလဲ ? (၂)
Friday, December 09, 2011 Admin No comments
နီယိုမော်ဒန်နဲ့ပတ်သက်ပြီး လူငယ်ကဗျာဆရာတချို့ဆီက မေးခွန်းတွေထွက်လာတာကြုံရပါတယ်။ နီယိုမော်ဒန်ဆိုတာ အနာဂတ်အတွက်ကဗျာလား။ နီယိုမော်ဒန်ဆိုတာကို စကားလုံးဝေါဟာရအနေနဲ့ပဲ ယူတာဆိုတော့ သူတို့ဆီက နီယိုမော်ဒန်နဲ့မတူဘူး လား။ မြန်မာနီယိုမော်ဒန်ဆိုတာကရော ဘယ်လိုကဗျာအမျိုးအစားတွေလဲ။ နီယိုမော်ဒန်ကဗျာရဲ့သွင်ပြင်လက္ခဏာတွေက ဘာတွေလဲ။ နီယိုမော်ဒန်မှာ Ideology ကအရင်လား၊ Artifacts ကအရင်ဖြစ်တာလား၊ မြန်မာနီယိုမော်ဒန်ကဗျာဆိုတာကရောရှိနေလို့လား။ တကယ် လို့ရှိနေပြီဆိုရင် အဲဒီကဗျာတွေကိုဖော်ထုတ်ဝေဖန်သုံးသပ်ပြသလို နောက်ခံသဘောတရားရေးရာ၊ ကဗျာအယူအဆတွေကိုပါ တည်ဆောက်ပြရင် ပိုအကျိုးရှိမယ်။
ဒါတွေက မြန်မာကဗျာယဉ်ကျေးမှုအသစ် ပြောင်းလဲဖြစ်ထွန်းဖို့အတွက် မေးသင့်မေးထိုက်တဲ့မေးခွန်းတွေပါပဲ။ တချို့ ၀ါရင့်ကဗျာ ဆရာတွေကတော့ ဆောင်းပါးတွေရေးမနေပါနဲ့ကွာ၊ အလုပ်ရှုပ်ပါတယ်၊ ကဗျာပဲရေးစမ်းပါတဲ့။ ကိုယ်ယုံကြည်ရာလမ်းကို လျှောက်နေကြ တဲ့လူတွေပဲလေ။ ကိုယ့်ရွေးချယ်ခွင့်နဲ့ကိုယ်မဟုတ်လား။ အမှားအမှန်ကိစ္စတွေက သိပ်တော့အရေးမကြီးလှဘူး။
နီယိုမော်ဒန်ကို စိတ်ဝင်စားယူတချို့ရဲ့ မေးခွန်းတွေကများပါတယ်။ ဒီလိုပဲအရေးအသားအသစ်တွေစမ်းသပ်တည်ဆောက်ရင်းနဲ့၊ ကဗျာသဘောတရားတွေစဉ်းစားဆင်ခြင်ရင်းနဲ့၊ သဘောထားအမြင်တွေဆွေးနွေးငြင်းခုံကြရင်းနဲ့ ကဗျာသစ်ယဉ်ကျေးမှုကိုတဖြည်းဖြည်း တည်ဆောက်သွားကြရမှာပါ။ ခေတ်ပေါ်ကဗျာကနေ နီယိုမော်ဒန်ဆီအရွေ့မှာ အယူအဆ/အရေးအသားတွေဟာ အယူဝါဒတစ်ခုအဖြစ် မတည်ရှိ၊ ပြီးပြည့်စုံမှုမရှိသေးဘဲ အခုမှစတင်၊ သန္ဓေတည်၊ ကြီးပြင်းဖို့ဟန်ပြင်ဆဲအခြေအနေမှာပဲ ရှိသေးတယ်ဆိုတာတော့နားလည်ပေး ထားကြဖို့လိုပါတယ်။
နီယိုမော်ဒန်မိတ်ဆက်အဖြစ် ရုပ်ရှင်တေးကဗျာမှာ ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ရေးခဲ့ဖူးပါတယ်။ သဘောထားတိုက်ဆိုင်မှု၊ အမြင်ကွဲလွဲမှု ဆိုတာကတော့ အထွေအထူးပြောနေစရာမလိုတော့တဲ့ အတွေးအခေါ်လွတ်လပ်ခွင့်ကိစ္စပါပဲ။ အခုဆက်လက်ပြီး နီယိုမော်ဒန်ရဲ့သွင်ပြင် လက္ခဏာတစ်ချို့ကိုဆွေးနွေးတင်ပြလိုပါတယ်။ ဒီလက္ခဏာတွေကို အခုနောက်ပိုင်းရေးဟန်ပြောင်းလဲလာတဲ့ကဗျာဆရာတချို့ရဲ့ကဗျာ အရေးအသားတွေအပေါ် လေ့လာမှုနဲ့ကျွန်တော့်စိတ်ကူးအချက်အလက်တွေပေါင်းစပ်ပြီး တည်ဆောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။
အနုပညာတွေနဲ့ပတ်သက်ရင် ကြွင်းမဲ့ခိုင်မာပြီး ပြည့်စုံတဲ့ပကတိအမှန်အမှားဆိုတာတွေမရှိပါဘူး။ တကယ်လို့ရှိတယ်လို့တစ်ဦး တစ်ယောက်ကအမြင်ကျဉ်းကျဉ်းနဲ့ပြောလာရင်လည်း အဲဒီအမှန်အမှားကိစ္စတွေကိုကျွန်တော်တို့စိတ်မ၀င်စားပါဘူး။ လူ့ဘ၀မှာ ကိုယ် ယုံကြည်ရာ ကိုယ်လုပ်ဖို့၊ ကိုယ်တည်ဆောက်ချင်ရာတည်ဆောက်ဖို့အတွက် ကျွန်တော်တို့ကဗျာဆရာဘ၀ကိုရွေးချယ်ထားကြတာပါ။ အယူအဆမှန်သည်ဖြစ်စေ၊ မှားသည်ဖြစ်စေ ကိုယ်ယုံကြည်ရာကိုင်စွဲ၊ လုပ်ခဲ့တယ်လို့တာဝန်ယူပါတယ်။
ဒီအချက်ဟာ ခေတ်ပေါ်ကဗျာရေသောက်မြစ်ကနေ ဆင်းသက်လာတဲ့လက္ခဏာတစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ခေတ်ပေါ်ကဗျာခေတ်ဦး ပိုင်းမှာ ကျွန်တော်တို့ရှေ့ကကဗျာဆရာတွေက ခေတ်ပေါ်အာရုံခံစားမှု/ခေတ်ပေါ်အာရုံခံစားပုံ/ခေတ်ပြိုင်အကြောင်းအခြင်းအရာဆိုတဲ့ စကားရပ်တွေ၊ အဓိပ္ပါယ်တွေကို ကိုယ်တွယ်သုံးစွဲခဲ့ကြတယ်။ ခေတ်ပြိုင်လူမှုအကြောင်းခြင်းရာတွေကို မျက်ခြည်မပြတ်ဘူးဆိုရင်၊ ခေတ် ပေါ်ကဗျာနဲ့မဝေးဘူးဆိုရင် အားလုံးနားလည်ရှင်းလင်းပြီးသားအကြောင်းအရာပါ။ ကျွန်တော်တို့ဖြတ်သန်းနေရတဲ့ခေတ်ရဲ့အရိပ်အရောင်/ သြဇာလွှမ်းမိုးမှု/ရိုက်ခတ်မှုတွေမပါဘူးဆိုရင် အဲဒီလိုကဗျာအရေးအသားတွေကို ဘာလုပ်မှာလဲ။ ခေတ်ပြိုင်ထဲကပုဂ္ဂလိကလူသား/လူသား အစုအဝေးရဲ့အာရုံခံစားမှု၊ သဘောထားအမြင်တွေကို မျက်ကွယ်ပြုထားတဲ့အရေးအသားတွေဆိုရင် အမှိုက်ပုံမှာစွန့်ပစ်ပြီးရေနုတ်မြောင်း ထဲ ပစ်ချလိုက်ဖို့ပဲရှိပါတယ်။
နီယိုမော်ဒန်ဟာ ကဗျာဆရာရဲ့အာရုံခံစားမှုနဲ့ ဘ၀အမြင်တွေကို အခြေခံသန္ဓေသားအဖြစ် သွေးသားဖွဲ့စည်းပြီးမှ “ကဗျာ”ဆိုတဲ့ အနုပညာလက်ရာပစ္စည်းကို ရေးသားဖန်တီးပါတယ်။ နီယိုမော်ဒန်ဟာ လူသားရဲ့အာရုံခံစားမှုကိုအလေးထားပြီး ဘာသာစကားကို အနု ပညာဖန်တီးရာမှာ မီဒီယမ်/ကြားခံပစ္စည်းအဖြစ်သာသုံးစွဲတယ်။ ဒါဟာ ကဗျာအနုပညာမှာ Foreground နဲ့ Background ကိုခွဲခြားထား ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ တချို့သူတွေအနေနဲ့ အရေးကြီးတဲ့အရာကို နောက်မှာထားပြီး ဘာမှအရေးမပါတဲ့သက်မဲ့သင်္ကေတအဆောက်အအုံတွေ ကို ရှေ့တန်းတင်နေရင် ပညာတတ်တလွဲဆံပင်ကောင်းသလိုအဖြစ်မျိုးဆိုက်နေပါလိမ့်မယ်။
သိပ္ပံပညာ၊ ဈေးကွက်စီးပွားရေး၊ ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာ၊ နောက်ဆုံးပေါ်ဇိမ်ခံကား၊ အကြမ်းဖက်စစ်ပွဲ၊ လူသုံးကုန်ပစ္စည်းအသစ် အဆန်းများစတဲ့ ရုပ်ပိုင်ဆိုင်ရာယဉ်ကျေးမှုတွေ တိုးတက်ထွန်းကားလာတာနဲ့အပြိုင် လူသားရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတန်ဖိုးတွေ ယုတ်လျော့ ကျဆင်းလာနေပါတယ်။ ရုပ်ဝတ္တုယဉ်ကျေးမှုနဲ့လူဦးရေပေါက်ကွဲနှုန်းအောက်မှာ လူသားရဲ့တစ်သီးပုဂ္ဂလအခန်းကဏ္ဍဟာ မှိန်ဖျော့လာပြီး လူအုပ်ကြီးထဲမှာ ရောနှောပျောက်ကွယ်နေတဲ့အဖြစ်ကို အထိတ်တလန့်မြင်တွေ့နေရပါတယ်။ ပို့စ်မော်ဒန်ခေတ်ကြီးထဲမှာ ရုပ်ဝတ္ထုတွေရဲ့ လွှမ်းမိုးမှုကြောင့်ပင်ကိုတန်ဖိုးတွေပျောက်ဆုံးေ၀၀ါးနေတဲ့လူသားရဲ့ပုဂ္ဂလိကသဘောကိုပြန်လည်ဖော်ထုတ်ဖို့ နီယိုမော်ဒန်ကအလေးထား ပါတယ်။ အဲဒီလိုနဲ့ နီယိုမော်ဒန်မှာလူသားရဲ့ပုဂ္ဂလိကကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးပေါ်လွင်ထင်ရှားလာပါတယ်။
(၄) ခေတ်ပြိုင်ထဲက Modern & Postmodern sensibility ပေါ်လွင်ထင်ရှားခြင်း
ခေတ်ပြိုင်ထဲက လူမှုဖြစ်ရပ်တွေကို အကြောင်းခြင်းရာအဖြစ်ရွေးချယ်ပြီးပြီဆိုရင် သူ့ကိုဖော်ကျူးတင်ပြမယ့်အာရုံခံစားပုံ/ဟန်ပန် တွေကို ခေတ်နဲ့အညီ ပြောင်းလဲတင်ပြဖို့လိုအပ်လာပါတယ်။ စကားလုံး/ဘာသာစကားကို ကဗျာဆန်ဆန်၊ လှလှပပ၊ ဆော့ကစားတည် ဆောက်ရုံနဲ့ ခေတ်ပေါ်/နှောင်းခေတ်ပေါ်အာရုံခံစားမှုဆီ ဆိုက်ရောက်နိုင်တာမဟုတ်သေးပါဘူး။ ဒီနေ့ခေတ်လူသားတွေရဲ့ခံစားမှု/အမြင် တွေဟာ ဘယ်လိုရှိသလဲ။ ဥာဏ်ပညာ၊ ငွေကြေး၊ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၊ ဖက်ရှင်၊ နည်းပညာတွေအပေါ်မှာ လူသားရဲ့သဘောထားကဘယ်လို လဲ။ ပို့စ်မော်ဒန်ခေတ်လူသားရဲ့အသိအမြင်၊ သဘောထားတွေဟာ ဘယ်လိုပြောင်းလဲနေသလဲ။ ပို့စ်မော်ဒန်လူသားဟာ ဥာဏ်ပညာကို လက်နက်တစ်ခုအဖြစ်ကိုင်စွဲရင်ကိုင်စွဲထားမယ်။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို အမှိုက်လို့မြင်ရင်မြင်မယ်။ အမှန်တရားလို့လူတွေပြောနေကြတဲ့အရာ ကို စက်ဆုပ်ရွံရှာစရာအဖြစ်မြင်ရင်လည်းမြင်လိမ့်မယ်။ ဒါဟာ သူ့ရဲ့အာရုံခံစားပုံအပြောင်းအလဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုမော်ဒန်/ပို့စ်မော်ဒန်အာရုံ ခံစားပုံအပြောင်းအလဲတွေ ဒီနေ့ခေတ်လူငယ်အဖွဲ့အစည်းထဲမှာ အများအပြားဖြစ်ပျက်နေတာကို ခေတ်ပေါ်ကဗျာသစ်ကပေါ်လွင်အောင် ဖော်ပြနိုင်ဖို့မလိုဘူးလားလို့ စဉ်းစားစရာဖြစ်လာပါတယ်။
(၅) လူအုပ်ကြီးထဲရောနှောပျောက်ဆုံးနေတဲ့ Identity ကိုရှာဖွေတည်ဆောက်ခြင်း
ပို့စ်မော်ဒန်ခေတ်ကြီးထဲမှာ တစ်သီးပုဂ္ဂလလူသားရဲ့ Identity ဟာ လူအုပ်ကြီးထဲရောနှောပျောက်ဆုံးနေသလို ကိုယ့်ရဲ့ Identity ကိုတည်ဆောက်ရတာလည်းခက်ခဲနက်နဲလာပါတယ်။ လူတစ်ဦးချင်းစီရဲ့ Identity ဟာ လူအုပ်ကြီးထဲမထင်မရှား ဖြစ်ရသလို အတွေးအခေါ်၊ အသိပညာအရ Identity ရဲ့သဘောလက္ခဏာတွေကလည်း အချိန်ကာလပယောဂနဲ့အမျှ အတည်မငြိမ်၊ မသေမချာ၊ အစိုမရ၊ ပြိုကွဲလေလွင့်၊ ပျောက်ဆုံးကွယ်လွန်နေကြတာကိုတွေ့မြင်လာရတယ်။ ဒီအခြေအနေမှာ ပို့စ်မော်ဒန်နစ်တွေက Identity ရဲ့ မရေရာမှု/ရောထွေးေ၀၀ါးနေမှုကို သူ့သဘာဝအတိုင်း လက်လွတ်စပယ်ပစ်ပယ်ထားလိုက်ကြတယ်။ နီယိုမော်ဒန်ကတော့ ဒါဟာ ဘယ်လို ပဲမသေချာ၊ မရေရာ၊ ယိမ်းယိုင်လှုပ်ရှားနေသည်ဖြစ်စေ၊ လူသားတစ်ယောက်အနေနဲ့ပြန်လည်ဆက်စပ်တည်ဆောက်ရမယ့်သဘောတွေ လို့ မှတ်ယူပါတယ်။ လူအုပ်ကြီးထဲရောနှောပျောက်ဆုံးနေတဲ့တစ်သီးပုဂ္ဂလလူသားရဲ့ Identity သဘောကို ပြန်လည်ရှာဖွေတည်ဆောက် ဖို့ ကြိုးပမ်းပါတယ်။ လူသားရဲ့တစ်သီးပုဂ္ဂလသဘောကို ရှာဖွေတည်ဆောက်တာ၊ အာရုံခံစားမှု၊ လောကအမြင်စတဲ့လူသားဆန်မှုတွေကို ဗဟိုပြုပြီး ကဗျာရေးသားခြင်းဆိုတာကို အတ္တကြီးမားတယ်/ငါစွဲထားတယ်/သက္ကာယဒိဌိဖြစ်တယ်/အနတ္တကို အတ္တလို့မြင်တဲ့အမြင်မှား ဖြစ်တယ်ဆိုပြီး ဘာသာရေးစံနှုန်းပေတံတွေနဲ့တိုင်းတာစွပ်စွဲလို့တော့မရနိုင်ပါဘူး။ ကဗျာဆရာ ကဗျာရေးခြင်းဆိုတာ လောကသံသရာက လွတ်မြောက်ရာအလုပ်ကို ကျင့်ကြံအားထုတ်နေတာမဟုတ်ဘဲ လူသားဆန်တဲ့ဖန်တီးမှုအနုပညာယဉ်ကျေးမှုကိုတည်ဆောက်နေတာဖြစ် လို့ပါပဲ။
(၆) ရေးဟန်နှင့် တင်ပြပုံပြောင်းလဲခြင်း
မော်ဒန်ကနေ နီယိုမော်ဒန်ကိုအရွေ့မှာ ကဗျာဆရာရဲ့ရေးဟန်နဲ့တင်ပြပုံအပြောင်းအလဲဟာ အဓိကအရေးကြီးတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ပိုင်း ဆိုင်ရာ ရွေ့လျားမှုဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ် ကိုင်တွယ်သုံးစွဲနေကျစကားလုံး၊ နိမိတ်ပုံ၊ သင်္ကေတ၊ အသံအသွားအလာ၊ ကိုယ်တည်ဆောက်နေ ကျ ၀ါကျ၊ ပါဒဖွဲ့စည်းပုံ၊ ကိုယ်အရိုးစွဲနေတဲ့ကဗျာ စီစဉ်တင်ပြပုံ၊ တွေးထောင့်တွေကို အသစ်ပြောင်းလဲပစ်ဖို့ကိစ္စက တကယ်တမ်းမှာလွယ် မယောင်နဲ့ခက်ပါတယ်။ တိမ်မယောင်နဲ့နက်ပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့အစွဲအလမ်း/ဟန်ပန်တွေကိုဖယ်ရှားစွန့်ပစ်လိုက်ရမှာဖြစ်လို့ ကိုယ့်အတ္တရဲ့ ဆန့်ကျင်မှု၊ အများလက်မခံနိုင်မှာစိုးရိမ်ထိတ်လန့်မှုတွေကို ရင်ဆိုင်ရနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒါကိုကျွန်တော်တို့စွန့်စားလုပ်ရမှာပဲ။ ဒီလို မလုပ်ရင် ကျွန်တော်တို့ခေတ်ပေါ်ကဗျာလမ်းဟောင်းထဲမှာပဲ တစ်လည်လည်ဖြစ်နေကြရပါလိမ့်မယ်။
နီယိုမော်ဒန်မှာ အာရုံခံစားပုံ/ရေးဟန်နဲ့တင်ပြပုံတွေကိုအပြောင်းအလဲလုပ်လိုက်ရင် ကဗျာစာသားတွေဆီကရတဲ့ ရသဟာလည်း အလိုအလျှောက်ပြောင်းလဲသွားပါလိမ့်မယ်။ ခေတ်ပေါ်ကဗျာဟာ ဘယ်လိုအရသာ/ရသမျိုးရှိတယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ကဗျာ ရေး၊ ဖတ်၊ လေ့လာတဲ့အတွေ့အကြုံတွေအရသိရှိခဲ့ကြပြီးပါပြီ။ ခေတ်ပေါ်ကဗျာရဲ့ရသပုံစံအဟောင်းကိုစွန့်လွှတ်ပြီး ရသအသစ်စမ်းသပ်ဖော်စပ်ရာမှာ အနုပညာရသပျက်မသွားအောင်၊ အရသာအသစ်အမှန်တကယ်ဖြစ်လာအောင်လုပ်ကြရမှာပါ။ နီယိုမော်ဒန်ရဲ့ရသအသစ်ဟာ ဘယ်လို ဘယ်ပုံ အရသာမျိုးလဲဆိုတာတော့ ကဗျာဆရာရဲ့ရသဖန်တီးနိုင်မှုစွမ်းရည်/ပရိတ်သတ်ရဲ့ရသခံစာနိုင်မှုစွမ်းရည်တွေအပေါ်လည်းမူတည် နေပါသေးတယ်။ ဒီနေရာမှာ အရင်ခေတ်တွေကလို “ရသ”ဆိုတာဘာလဲမေးခွန်းထုတ်နေဖို့၊ စဉ်းစားအဖြေရှာနေဖို့အချိန်မရှိပါဘူး။ ရသ အပြောင်းအလဲ Aesthetic Shift လုပ်ဖို့ကိုပဲ ခေါင်းထဲထည့်ထားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ့်အနုပညာအတွေ့အကြုံနဲ့ကိုယ် ရသအသစ် ပြောင်းလဲနိုင်ဖို့အားထုတ်ကြရမှာပဲပေါ့။
(၈) အဇ္ဈတ္တခံစားမှု ပိုင်းစစိတ်မြွှာခြင်း
ပို့စ်မော်ဒန်အတွေးအခေါ်တွေထဲက Theory of Fragmentation ဒီအတွေးအမြင်ကို အနုပညာလက်ရာတွေထဲ သွန်းလောင်း ထည့်လိုက်တဲ့အခါ ၀ါကျအပိုင်းအစတွေ၊ စကားစုအပိုင်းအဖြတ်တွေဖြစ်သွားကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ၀တ္ထု/ကဗျာထဲမှာ ပို့စ်မော်ဒန်လူသား ရဲ့အာရုံခံစားမှုအကျိုးအကြေ/အပိုင်းအစတွေပါမလာဘဲ အတွေးအခေါ်ထဲမှာအနည်ထိုင်ကျန်ရစ်နေခဲ့ကြတယ်။ ပို့စ်မော်ဒန်နစ်တွေရဲ့ အဲဒီအားနည်းချက်ကို နီယိုမော်ဒန်ကသတိပြုမိပြီး အနုပညာလက်ရာတွေထဲမှာ ကျိုးကြေစိတ်မြွှာနေတဲ့ အဇ္ဈတ္တအာရုံခံစားမှုတွေ ထည့်သွင်းနိုင်အောင်ကြိုးစားဖို့ဆင်ခြင်မိပါတယ်။ စကားစု / ပါဒ / ၀ါကျအပိုင်းအစတွေနဲ့အတူ ပို့စ်မော်ဒန်လူသားရဲ့စိတ်ခံစားမှု အကျိုး အကြေ၊ အနည်အဖတ်တွေပါဝင်လာရင် နီယိုမော်ဒန်ရဲ့ထူးကဲတဲ့အရသာကို စမ်းသပ်မြည်းစမ်းမိနိုင်မယ်ထင်ပါတယ်။
(၉) အတွေးအမြင်များ အချိုးပျက်ခြင်း
“အဇ္ဈတ္တခံစားမှု ပိုင်းစစိတ်မြွှာခြင်း”မှာ ဆွေးနွေးခဲ့သလိုပါပဲ။ နီယိုမော်ဒန်က ကဗျာရဲ့မျက်မြင်ပုံသဏ္ဍာန်အချိုးပျက်ခြင်းထက် ကဗျာဆရာရဲ့အတွးအခေါ်/အာရုံခံစားပုံ အချိုးပျက်ခြင်းကို ပိုအလေးထားပါတယ်။ လူ့အဖွဲ့အစည်း/အနာဂတ်/ယဉ်ကျေးမှု/လူ့ဘ၀ အဓိပ္ပါယ်ဆိုတာတွေကို ဘယ်လိုဖွင့်ဆိုလို့ဖွင့်ဆိုရမှန်းမသိအောင် ရှုပ်ထွေး/ထွေပြား/ပွေလီလှတဲ့ ပို့စ်မော်ဒန်ခေတ်ကာလကြီးထဲမှာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့သဘောထား/အတွေးအမြင်တွေ အချိုးပျက်တွန့်လိမ်နေပုံကကြောက်မက်ဖွယ်ရာ/အံ့သြတုန်လှုပ်ဖွယ်ရာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ခေတ်ရဲ့လူငယ်တွေမှာ ကိုးကွယ်ယုံကြည်ရာအယူဝါဒမရှိတော့ဘူး။ တန်ဖိုးထားယုံကြည်ရာအနှစ်သာရတွေပျောက်ဆုံးနေ ကြပြီ။ ခေတ်အဆက်ဆက်ကိုးကွယ်ယုံကြည်ခဲ့ကြတဲ့အမှန်တရားဆိုတဲ့အရာဟာ သံသယဖြစ်ဖွယ်ရာ၊ မေးခွန်းထုတ်ဖွယ်ရာ အသိခံအရာ တစ်ခုဖြစ်နေပြီ။ တချို့ဝေဖန်သုံးသပ်သူတွေပြောသလို ခေတ်ပေါ်ကဗျာဟာ နတ္ထိဝါဒဆီဦးတည်ရွေ့လျားနေတယ်ဆိုတာကလည်း ဒီလို အတွေးအမြင်တွေ အချိုးပျက်ရာက စတင်မြစ်ဖျားခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့ခေတ်ရဲ့ဂီတက ၁၉၆၀ခုနှစ်တွေဆီက ရော့ခ်ဂီတမဟုတ်တော့ ပါဘူး။ ဒီနေ့ခေတ်ရဲ့ဂီတက Hip-Hop, Alternative, Punk-Metal နဲ့ Nu-Metal.
(၁၀) အကြောင်းအရာများ ရောထွေးထားခြင်း
ခေတ်ပြိုင်အနုပညာလက်ရာတချို့ကိုလေ့လာကြည့်တဲ့အခါ အကြောင်းအရာအရ ဗဟိုချက်ကင်းမဲ့နေတဲ့ အရေးအသားတွေကို တွေ့မြင်ကြရမှာပါ။ ကဗျာစာသားတွေထဲမှာ ၀ါကျတစ်ကြောင်းဟာ အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုသယ်ဆောင်လာတယ်။ အကြောင်းအရာ တစ်ခုမပြီးဆုံးခင်မှာ တခြားအကြောင်းအရာအသစ်တစ်ခုဖြတ်ဝင်လာတယ်။ လက်ရာ/စာသားတစ်ခုလုံးလွှမ်းခြုံကြည့်လိုက်တော့ အကြောင်းအ၇ာအပိုင်းအစတွေဆက်စပ်စီစဉ်ထားတဲ့အတွက် တိကျသေချာတဲ့ဗဟိုချက်ပျောက်ဆုံးသွားတာတွေ့ရပါတယ်။
နီယိုမော်ဒန်မှာ အကြောင်းအရာဗဟိုချက်ကင်းမဲ့ခြင်းနဲ့အတူ အာရုံခံစားမှုဗဟိုချက်ကင်းမဲ့ခြင်းကို ပေါ်လွင်ထင်ရှားအောင်လုပ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ အာရုံခံစားမှုဗဟိုချက်ကင်းမဲ့ခြင်းဟာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့မရေရာမသေချာတဲ့ လူ့ဘ၀စီမံကိန်းတွေဆီကနေ မြစ်ဖျားခံလာ ပါတယ်။ လက်ရှိပစ္စုပ္ပန်ဘ၀ဖြစ်တည်မှု၊ အနာဂတ်အလားအလာ၊ အတွေးအခေါ်အယူဝါဒ၊ ငွေကြေးနဲ့ဖက်ရှင်ပစ္စည်းစသဖြင့် ကျွန်တော်တို့ ရဲ့လူ့ဘ၀မှာ အမှန်တကယ်ဗဟိုပြု/စွဲလမ်းဆုပ်ကိုင်ထားရမယ့်အရာဆိုလို့ ဘာဆိုဘာမှမရှိပါဘူး။ လူသားဟာ သူ့ဘ၀မှာဗဟိုပြုတွေးခေါ်/ အာရုံခံစားရာ ဘာဆိုဘာမှမရှိတဲ့အဖြစ်မှန်ကို မျက်မှောက်ပြုနေရတယ်။ ဗဟိုပြုစရာအကြောင်းအရာပျောက်ဆုံးသွားတာနဲ့အမျှ သူ့အာရုံ ခံစားပုံ/လောကအမြင်တွေဟာလည်းChaos/Alternativeဖြစ်လာပါတယ်။ ဒါကိုအထင်မှားပြောခဲ့တဲ့ “အကြောင်းအရာဗဟိုချက်ကင်းမဲ့မှု” လောက်နဲ့ချဉ်းကပ်တင်ပြလို့မပြည့်စုံနိုင်ပါဘူး။ ကဗျာဆရာဟာ ခေတ်ပြိုင်လူသားနဲ့ သူ့ရဲ့အာရုံခံစားမှုဗဟိုချက်ကင်းမဲ့မှုကို ထိရောက်ပီပြင် တင်ဆက်ဟောပြောဖို့ ခေတ်လူသားရဲ့ အဇ္ဈတ္တအတွင်းလွှာထဲထိ ထိုးထွင်းသိမြင်ကြည့်နိုင်မှဖြစ်လိမ့်မယ်။ လူသားရဲ့ဘ၀မှာ အာရုံခံစားမှု တွေ ပိုင်းစစိတ်မြွှာနေတာ၊ ဗဟိုချက်ကင်းမဲ့နေတာမြင်ရင် နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ အဲဒီလိုအဓိပ္ပါယ်ထွက်တဲ့စကားလုံးရဝေါဟာရတွေကို ရှာဖွေဆက်စပ်တည်ဆောက်ကြည့်ဖို့စိတ်တိမ်းညွတ်လာပါလိမ့်မယ်။
(၁၂) လူ/လူအများရဲ့အမြင်နဲ့ အာရုံခံစားမှုများ ရောထွေးနေခြင်း/ပေါင်းစပ်ရေးဖွဲ့ခြင်း
ကဗျာဆရာဟာ ခေတ်ပြိုင်လူ့အဖွဲ့အစည်းထဲမှာ/လူအုပ်ကြီးထဲမှာ ရောနှောနေထိုင်ရှင်သန်နေရတဲ့ ပုဂ္ဂလိကလူသား တစ်ယောက်သာဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ဘ၀ကို သူ့ကိုယ်ပိုင်လောကအမြင်တွေနဲ့လုံခြုံအောင်တည်ဆောက်ထားသည်ဖြစ်စေ၊ ခေတ်/လူ့အဖွဲ့ အစည်းရဲ့သဘောထားအမြင်/တန်ဖိုးတွေရဲ့ရိုက်ခတ်မှုကို မလွဲမသွေရိုက်ခတ်ခံရစမြဲဖြစ်တယ်။ သူ့ရဲ့လောကအမြင်/အာရုံခံစားမှု/အယူ အဆတွေဟာလည်း ခေတ်ထဲမှာရှိနှင့်နေပြီးသားဖြစ်တဲ့၊ တည်ဆောက်ပြီး/ဆဲ ယဉ်ကျေးမှုက သွန်သင်ပြဌာန်းထားတဲ့အရာတွေနဲ့ ရောထွေးနေပါတယ်။ အဲဒီအခြေအနေဟာ နီယိုမော်ဒန်မှာ အရေးကြီးတဲ့လက္ခဏာတစ်ရပ်ဖြစ်လာတယ်။ နီယိုမော်ဒန်မျာ ကဗျာဆရာရဲ့ အာရုံခံစားမှု/လောကအမြင်တွေအပြင် တခြားသူ/ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အမြင်ခံစားမှုတွေပါ ရောနှောတင်ပြဖို့စဉ်းစားလာကြတယ်။ ဒါဟာ ခေတ်ပြိုင်လူအုပ်ကြီးထဲက အခြားသူတွေရဲ့ Identity ကို Imitate လုပ်ဖို့ကြိုးစားကြည့်ခြင်းပါပဲ။
ခေတ်ပြိုင်ကဗျာသမိုင်းတစ်လျှောက်လုံးမှာ ကဗျာဆရာတွေက နိမိတ်ပုံ/သင်္ကေတတွေကို အစွမ်းကုန်ရှာဖွေသုံးစွဲခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီလိုအားထုတ်ကြရာမှာ သန်မာလတ်ဆတ်တဲ့နိမိတ်ပုံ/သင်္ကေတတွေရခဲ့ကြသလို ကဗျာဖတ်သူနဲ့ဝေးကွာနေတဲ့နိမိတ်ပုံ/သင်္ကေတတွေကို လည်း မလွဲမသွေတွေ့ခဲ့ကြပါတယ်။ ခေတ်ပေါ်ကဗျာနှောင်းပိုင်း (၂၀၀၀-၂၀၀၅)နောက်မှာတော့ ကဗျာဆရာတချို့က နိမိတ်ပုံ/သင်္ကေတ တွေလျှော့ချဖို့ ဟန်ပြင်လာကြတာသတိပြုမိကြပါလိမ့်မယ်။ နီယိုမော်ဒန်မှာ အထူးပြုလုပ်ဖန်တီးထားတဲ့ နိမိတ်ပုံ/သင်္ကေတတွေရဲ့အခန်း ကဏ္ဍဟာ မိန်ဖျော့လာပါတယ်။ ဒါဟာ ခေတ်ပေါ်ကဗျာသမိုင်းတစ်လျှောက်လုံး အားပြုသုံးစွဲလာတဲ့ အလင်္ကာအသုံးအနှုန်းတွေကို ရိုးအီ ငြီးငွေ့လာတာကတစ်ကြောင်း၊ ကဗျာဖတ်သူပရိတ်သတ်နဲ့နီးကပ်အောင် တိုးရွေ့လိုတာကတစ်ကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။
(၁၄) အရပ်သုံးဘာသာစကားများ ရောနှောသုံးစွဲခြင်း
နိမိတ်ပုံ/သင်္ကေတတွေကို လျှော့ချလိုက်တာနဲ့အမျှ ကဗျာဘာသာစကား (အလင်္ကာတန်ဆာဆင်မှု/ကဗျာဆန်ဆန်လှပနူးညံ့မှု) ရဲ့ ရွှေရည်ရွှေသွေးက စံနှုန်းလျော့ကျသွားမှာပါပဲ။ ကဗျာဘာသာစကားရဲ့တချို့အစိတ်အပိုင်းတွေမှာ အရပ်သုံးဘာသာစကားက ၀င်ရောက်နေရာယူလာမယ်။ ကဗျာဘာသာစကားနဲ့ အရပ်သုံးဘာသာစကား အရောအနှော၊ စပ်ဟပ်ပုံရာခိုင်နှုန်းကတော့ ကဗျာဆရာ တစ်ဦးချင်းစီရဲ့ စိတ်တိမ်းညွတ်မှုအပေါ်မူတည်ပါတယ်။ ကဗျာဘာသာစကားနေရာမှာ အရပ်သုံးဘာသာစကားဝင်ရောက်လာတာဟာ ခေတ်ပေါ်ကဗျာသစ်နဲ့ ကဗျာဖတ်သူကြားက အကွာအဝေးကို ဆွဲချုံ့ပစ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။
(၁၅) ရိုးရှင်းလွယ်ကူသော အဓိပ္ပါယ်/အနက်ဖွင့်စံနစ်များတည်ဆောက်ခြင်း
ခေတ်ပေါ်ကဗျာသမိုင်းတစ်လျှောက်လုံးမှာ ကျွန်တော်တို့ရှေ့ကကဗျာသုတေသီ(မြဇင်၊ မင်းလှညွန့်ကြူး၊ မောင်သာနိုး၊ မျိုးသန့်) တွေ ပြောဆိုခံယူခဲ့ကြတဲ့ ခေတ်ပေါ်ကဗျာရဲ့လက္ခဏာတစ်ခုက သွယ်ဝိုက်ဖွဲ့ဆိုတဲ့ ၀င်္က၀ုတ္တိသဘော၊ မှန်ကူကွက်သဘောတွေဖြစ်ပါ တယ်။ အဲဒီလက္ခဏာဟာ ခေတ်အခြေအနေအရ ပေါ်ထွက်လာခဲ့တာမှန်ပေမယ့် ကဗျာသဘောတရား စူးစမ်းလေ့လာမှုအားနည်းတဲ့၊ ကဗျာဖတ်ကျင့်အလေ့အထသိမ့်မရှိတဲ့ ကဗျာဖတ်သူတွေနဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ အလှမ်းကွာခဲ့ပါတယ်။ နီယိုမော်ဒန်မှာ ခေတ်ပေါ် ကဗျာရဲ့ ၀င်္က၀ုတ္တိသဘော၊ မှန်ကူကွက်သဘောတွေကိုစွန့်လွှတ်ပြီး ရိုးရှင်းလွယ်ကူတဲ့ အဓိပ္ပါယ်/အနက်ဖွင့်စံနစ်တွေဆီ ပြောင်းလဲရွေ့ လျားသွားပါတယ်။ ကဗျာဆရာဟာ သူပြောလိုတဲ့ဆိုလိုရင်းရောက်အောင် တိုက်ရိုက်/ဒဲ့ဒိုးပဲပြောတယ်။ ခေတ်ပေါ်ကဗျာခေတ်ကလို သွယ်ဝိုက်တာတွေ၊ မူယာမာယာများတာတွေလုပ်မရတော့ဘူး။ ဒါဟာ ခေတ်ပြိုင်ထဲမှာ ပေါ်ထွန်းနေတဲ့ဟစ်ဟော့ပ်ဂီတ၊ ပန့်ခ်ဂီတာတွေရဲ့ ရိုးသားပွင့်လင်းမှုတွေနဲ့ဆက်နွယ်နေပါတယ်။
(၁၆) ကဗျာအတွင်းသားအပျော့ထည် (Soft-ware) များပြောင်းလဲခြင်း
ကဗျာရဲ့အတွင်းသားအပျော့ထည် (Soft-ware) ဆိုတာ အာရုံခံစားပုံ၊ နိမိတ်ပုံသင်္ကေတ၊ အသံအသွားအလာတွေကိုဆိုလိုပါ တယ်။ နီယိုမော်ဒန်မှာ အာရုံခံစားပုံ/စိတ်ကူးစိတ်သန်း/အသိပညာအပြောင်းအလဲအပြင် နိမိတ်ပုံ၊ သင်္ကေတ၊ အသံအသွားအလာအသစ် တွေကိုလည်း ရှာဖွေဖို့လိုပါတယ်။ ကဗျာဆရာတစ်ဦးချင်းစီမှာ ကိုယ်ပိုင်ဟန်လိုပုံသေဖြစ်နေတဲ့ စကားလုံး/အသံ/ဘာသာစကားအကွက် အဆင်တွေရှိနေတတ်ကြပါတယ်။ နီယိုမောဒန်မျာကဗျာဆရာရဲ့ Concept ကို ပထမအဆင့်ပြောင်းလဲပြီးတာနဲ့ ပုံသေဖြစ်နေတဲ့ ကိုယ်ပိုင် အရေးအသားဟန်ပန်တွေကို စွန့်လွှတ်ဖို့၊ စမ်းသပ်ချဲ့ထွင်ဖို့အရေးကြီးလာပါတယ်။ အာရုံတိမ်းညွတ်နေကျအကြောင်းအရာတွေကို သွေဖီ၊ အသုံးပြုနေကျစကားလုံးအဟောင်းတွေကို စွန့်လွှတ်၊ ကိုယ်ပိုင်ဟန် အသံအသွားအလာတွေကို ရှောင်ကြဉ်၊ စကားလုံးအစပ်အသစ်တွေ ရှာဖွေနိုင်ဖို့ဟာ ကဗျာသစ်အသွင်ပြောင်းလဲမှုအတွက် အေ၇းကြီးတဲ့စဉ်းစားစရာအချက်အလက်တွေပါပဲ။
(၁၇) ပေါ်ပြူလာဖြစ်နေတဲ့ အရေးအသား/ဟန်ပန်များကို ရှောင်ကြဉ်ခြင်း
ခေတ်ပေါ်ကဗျာသမိုင်းကိုအပေါ်စီးကကြည့်ရင် အများကြိုက်ပေါ်ပြူလာဖြစ်တဲ့အရေးအသား၊ ဟန်ပန်မျိုးတွေမကြာခဏဆိုသလို ခေါင်းထောင်ထွက်ပေါ်လာတတ်ကြတာကိုသတိပြုမိကြပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီလိုပေါ်ပြူလာ/ပေါ်ပင် အရေးအသားမျိုးတွေဟာ ဖက်ရှင်အသစ် အဆန်းတွေလိုပဲ အတွေးအခေါ်နုနယ်တဲ့ကဗျာဆရာတချို့ကို ဖြားယောင်းဆွဲဆောင်တတ်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အချိန်တန်လို့တစ်နှစ် လောက်ကြာပြီးဆိုရင် ပေါ်ပြူလာဖြစ်ခြင်း၊ လတ်တလောဖက်ရှင်ဖြစ်ခြင်းရဲ့ သဘာဝအတိုင်းပြန်တိမ်မြုပ်မှေးမှိန်သွားကြတာပါပဲ။ ဥပမာ နိုင်ငံတကာသတင်းဂျာနယ်ထဲက သတင်းခေါင်းစဉ်တွေချည်းသက်သက် ဆက်စပ်ဖွဲ့စည်းပြီး ကဗျာရေးတာမျိုး၊ တစ်ယောက်ကစစ်ပွဲ ကဗျာဆိုရင် နောက်တစ်ယောက်ရဲ့ကဗျာထဲမှာ မီးခိုးနံ့ယမ်းနံ့တွေဆူဝေသွားတာမျိုး၊ တစ်ယောက်က ဘာသာစကားဆိုရင် တစ်ယောက် က စကားဘာသာဆိုတာမျိုး၊ ပြီးတော့ ကဗျာကိုဘယ်လိုစပြီးဘယ်ပုံသယ်ဆောင်၊ ဘယ်လိုအဆုံးသတ်ပြီးပြီမို့ ကဗျာဖတ်သူက ခေါင်းစဉ် ကြည့်တပ်လိုက်ပါဆိုတာမျိုးတွေပေါ့။
အခု ဥပမာပေးခဲ့တဲ့သဘောတွေဟာ မြန်မာကဗျာသမိုင်းမှာ ရေပွက်ပမာ သွေးရူးသွေးတန်းထပွက်ပြီး ပြန်ပျောက်ကွယ်သွားမယ့် ဖက်ရှင်တွေဆိုတာ နီယိုမော်ဒန်တွေက သဘောပေါက်ထားကြပါတယ်။ နီယိုမော်ဒန်တွေက အဲဒီလိုပေါ်ပြူလာ/ဖက်ရှင်ဖြစ်တဲ့ အရေး အသားမျိုးတွေကို ဂရုစိုက်ရှောင်ကြဉ်ပါတယ်။ သူတို့က လတ်တလော လူကြိုက်များ၊ ခေတ်စားနေတဲ့ကဗျာဖက်ရှင်ဒီဇိုင်းကိစ္စတွေကို သိပ်စိတ်မ၀င်စားဘဲ သမိုင်းခေတ်ရဲ့တောင်းဆိုမှုနဲ့အညီသွားရမယ့် ခေတ်၏ကဗျာသစ်ရဲ့ရေရှည်ခြေလှမ်းအလားအလာကို လေးနက်တဲ့ သဘောထားနဲ့ရှုမျှော်ကြပါတယ်။
နီယိုမော်ဒန်ရဲ့နောက်ခံအယူအဆနဲ့ သွင်ပြင်လက္ခဏာတချို့နဲ့ပတ်သက်ပြီး ကျွန်တော်တတ်နိုင်သမျှဆွေးနွေးတင်ပြပြီးပါပြီ။ ဒါတွေဟာ သံမဏိစည်းမျဉ်းတွေမဟုတ်သလို အလွတ်ကျက်ကိုးကားရမယ့် အဆိုအမိန့်တွေ၊ စံပြအဖြေလွှာတွေလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ အရပ်စကားနဲ့ပြောရရင် ကြိုက်တာရွေးယူ၊ မကြိုက်တာလွှင့်ပစ်လိုက်ပေါ့ဗျာ။
အနုပညာရပ်တွေနဲ့ပတ်သက်လာရင် အကြွင်းမဲ့ခိုင်မာပြီး ပြည့်စုံတဲ့ပကတိအမှန်အမှားဆိုတာတွေမရှိပါဘူး။ တကယ်လို့ရှိတယ် လို့ တစ်ဦးတစ်ယောက်ကအမြင်ကျဉ်းကျဉ်းနဲ့ပြောလာရင်လည်း အဲဒီအမှန်အမှားကိစ္စတွေကိုစိတ်မ၀င်စားပါဘူး။ လူ့ဘ၀မှာကိုယ်ယုံကြည် ရာကိုယ်လုပ်ဖို့၊ ကိုယ်တည်ဆောက်ချင်ရာတည်ဆောက်ဖို့အတွက် ကျွန်တော်တို့ကဗျာဆရာဘ၀ကို ရွေးချယ်ထားကြတာပါ။ အယူအဆ မှန်သည်ဖြစ်စေ၊ မှားသည်ဖြစ်စေ ကိုယ်ယုံကြည်ရာ ကိုင်စွဲ လုပ်ခဲ့တယ်လို့ တာဝန်ယူပါတယ်။